Rima sy Ny Eja : Hiaraka amin’ny « Tiako izy » -
AccueilVaovao SamihafaRima sy Ny Eja : Hiaraka amin’ny « Tiako izy »
Anarana tsizoviana eo amin’ny asa-soratra Malagasy. Hiaraka amin’ny antsan-tononkalo « Tiako izy » i Rima sy Ny Eja. Etsy amin’ny efitrano malalaky ny Tahala Rarihasina Analakely no hantanterahana izany ny 26 sy 27 novambra izao. Io lohatenin’ny hetsika hiarahan’izy mianadahy ireo no hisalotra ihany koa ny lohatenin’ny boky ahitana ny sanganasan’izy ireo izay hivoaka mandritra ireo andro roa ireo.
Tanjon’izy mianadahy amin’ny famoahana io boky ion y fitiavana ny tononkalo Malagasy mba ahafahan’izy ireo mirafa sy mampitia izany amin’ny Malagasy, indrindra ho an’ireo tanora mpianatra eny amin’ny Kolejy sy ny lisea. « ankoatra ny maha-kanto azy, dia manana ny adidinay mitondra fampandrosoana amin’ny alalan’ny zava-kanto izahay, ary ao anatin’izany ihany koa ny adidy amin’ny maha-mpanabe sy fanabezana ho olom-pirenena vanona », araka ny fanamarihan’i Ny Eja.
Samy hiezaka hampiseho sy hampiranty ny sanganasany izy mianadahy ireo.
Ankoatra ny maha-mpanoratra azy anefa dia mpitantara angano ary anisan’ny nanao fikarohana tamin’ny lalao Malagasy ihany koa i Ny Eja. Mandritra ny hetsika ary dia hampahafantarin’ity mpanoratra ity ireo mpitsidika ny lalao sady fanabezana antsoina hoe « Kalaza ». Io lalao io dia niarahany niasa tamin’ny tahiry ho an’ny fampandrosoana na ny FID (Fond d’Intervention de Développement), tamin’ny alalan’ilay tetikasa « Fiavota ». Ny Kalaza dia nahazo ny loka avy amin’ny Fondation Tany Meva.
Mandritra ny roa andro hanatanterahana ny « Tiako izy », dia afaka miserasera mivantana amin’ireo mpanakanto ihany koa ny mpitsidika. Anisan’ireo entin’i Ny Eja mandritra io hetsika io ireo boky ef nosoratana raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Ilay fitia », « Poezia Mafana »… Anisan’ireo sanganasan’i Rima ho hita amin’ny hetsika ny « Nofy Tiako », ary mazava ho azy ny ahitana ny « Tiako izy ».